आइमाई - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by निरूपा प्रसून August 10, 2019
जूनको उज्यालोमा सँगसगै हिँडेर ऊ र म घर आइपुग्याैँ । ऊ कथा–कविता केही पनि लेख्दिन । तर उसको कुरा मैले पढ्ने कविता अर्थात् मलाई मनपर्ने कविताको पङ्क्तिभन्दा उत्कृष्ट लाग्छ मलाई । धेरै बोल्दिन । नबोल्ने केटी पनि होइन ऊ ।
मेरो घर छेउको प्रजापतिको घरमा भाडामा बस्न आएको, छ–सात महिना भयो । यति नै उमेरकी हो भन्न सक्दिनँ । कहिले बीस–बाइसकी जस्ती लाग्छे । कहिले छब्बीस–सत्ताइसकी । लौ, कहिले त ऊ सोह्र–सत्र वर्षझैँ लाग्छ । थरीथरीका पहिरनले युवतीहरुको रुपरङ्गै फेरिदिन्छ । जीउडालको ढाँचै बदलिदिन्छ । अनेक रुप र बनोटकी लाग्छे मलाई कौशला । राम्री देखिन ठूला–ठूला, काला–काला आँखा नै हुनु पनि जरूरी रहेनछ । कैला स–साना आँखा, गुलाबी ओठ र सेतो छाला नै उसलाई औधि सुहाएको छ । स्लीमको जमानामा ऊ पातली नै छे । म त भन्ठान्थँे मेन्टेन गरी होली । होइन रहेछ । मोटी हुन पाए हुन्थ्यो भनेर कामना गरी बस्छे । मोटाएकी छैन । ऊसँग बोल्न थालेको एक–डेढ हप्तापछिदेखि नै मैले उसलाई जिस्काउन थालेको थिएँ ।
‘मोटी हुनु छ भने मसँग सम्पर्क राख ।’ ऊ लजाउँदिन र हाँस्दिन पनि । अचम्मकी युवती । म यही नै कारणले उसको नजिक भएँ भन्ने निश्चित कारण छैन । त्यत्तिकै । त्यत्तिकै पनि के पाएर हुन्थ्यो र ? मेरी बूढी इजरायल गएकी छे । भयो सात–आठ वर्ष । उसलाई आफ्नो नाममा घर र आफ्नै कार किन्नु छ । मलाई त यही सँगोलको घर नै पर्याप्त छ । छुट्टिँदा दुई कोठा भागमा परिहाल्छ । त्यति भए पुग्छ पनि । किन बेकारमा ढुङ्गामाटो जम्मा पार्नु ? म परेँ कवि मनको भावुक मान्छे । मेरी बूढी परम्परागत स्वास्नीमान्छे । भएको भन्दा बढी शान देखाउनुपर्ने । ठाँटिएर हिँड्नुपर्ने । मेरो औकातले नभ्याउने कुरा । आफ्नो रहर आफैँ पूरा गर्न हिँडिदिई मेरी बूढी उत्तरआधुनिक नारी बनेर इजरायल । फोन गरिरहन्छे । म पनि कहिलेकसो गर्छु । खुब ठूला–ठूला कुरा गर्ने भ’की छे ।
दिउँसो ३ बजेदेखि राति १० बजेसम्मको अफिस । त्यसअघि त मलाई फुर्सद नै फुर्सद । कौशला मेरो घर छेउमा बस्न थालेदेखि मेरो फुर्सदले पनि फुर्सद पाएको छैन । ऊ त दिनैभर फुर्सदिली हुन्छे । ऊ ब्याचलर डिग्रीको रिजल्ट पर्खिबसेकी छे ।
म प्रेमलाई स्वभाव भन्ठान्छु । जतिखेर जोसँग पनि हुनसक्छ । मलाई लाग्दैन— प्रेमलाई कुनै नाम दिनुपर्छ । र प्रेम प्राप्ति होइन । प्रेम आफैँसँग हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । यो मेरो आफ्नै सिद्धान्त हो । कोही कवि, लेखक अथवा कुनै दार्शनिकबाट प्रभावित भएको होइन म । कसैले यस्तै भनेका रहेछन् भने त्यो संयोग मात्र हुनेछ ।
हो, यतिखेर म दिलोज्यानले कौशलालाई प्रेम गर्ने भएको छु । ऊ पनि भन्छे ।
‘तपाईं पनि एक प्रकारको मेरो प्रेमी नै हो । तपाईंलाई अधैर्य भएर पर्खन–तपाईंसँग बाटोमा गफ गर्दै हिँड्न मलाई औधि मन पर्छ ।’
तपाईं भन्ठान्नुहुन्छ होला, यो अनैतिक सम्बन्ध भयो । तर मलाई अलिकति पनि लाग्दैन, मैले अनैतिक सम्बन्ध जोडिरहेको छु । प्रेम एक जनासँग मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन । दुई दिनको जिन्दगीमा भेटे जति सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ । सजिलोसँग बाँच्ने आनन्दको शैली पनि हो यो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रेमले मान्छेलाई अपडेटेड बनाउँछ । मेरो आफ्नै कुरा, प्रेम गर्न जो कोहीलाई मलाई जस्तै गरी आउँछ झैँ पटक्कै लाग्दैन । म पर्फेक्ट तरिकाले प्रेम गर्छु । युवतीहरुलाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । ठूलो कुनै मिहिनेत नै गर्नु पर्दैन । एकदमै सानो–सानो कुराले मख्ख पर्छन् । केटीहरु भन्दा स्वास्नीमान्छे अर्थात् बिहे भइसकेकाहरुलाई छिट्टै फसाउन सकिन्छ तर यो अलि समस्याको बाटो हो । दुई–चार भेटमै स्वास्नीमान्छेहरु छोराछोरी, लोग्ने र घरबारको मतलब नगरी मसँग लिप्त हुन्छन् । माइती र घरतिरको इज्जत–प्रतिष्ठाभन्दा मेरो मायाको फिक्री पर्न थाल्छ उनीहरुलाई । जब उनीहरु मेरा लागि बसिरहेको घरबार छोड्न तम्सन्छन् तब मेरो प्रेम उत्कर्षमा पुग्छ । मेरो आदत छैन, लामो समयसम्म एउटैसँग उठबस गर्ने । बढीमा एक वर्षसम्म एउटीसँग टिक्छु म । मलाई सबै उमेर र सबै किसिमका केटी–स्वास्नीमान्छेहरुसँग सङ्गत गरी भ्याउनु पनि त छ। आजसम्म कुनै स्वास्नीमान्छेले मलाई घृणा गरेको यो कानले सुन्नुपरेको छैन । सौभाग्य, सबै जना रोएरै बिछोडिन्छन् । यो जन्ममा यस्तै भयो, अर्को जन्ममा मेरो भएर जन्मने वाचा–बन्धनसहित । यसै मैले उनीहरुलाई प्रेमको पाठशाला भन्ने गरेको होइन नि ! आदरसत्कार पनि त गर्छु म उनीहरुलाई ।
अहो ! केही गरी अर्को जन्म पनि भइहाल्यो भने त ? बर्बाद हुन्छु म । जन्मै भएपछि त वाचाबन्धन पनि साकार हुने होला । होइन त ? बरू जन्मनै नपरोस् ! होइन होइन, जन्मनु त पर्छ । तर केटी भएर । केटी मात्र होइन । एकदमै अप्सरा जस्तै भएर अनि धनी बाबुकी एक्ली छोरी भएर । तब आउँछ जिन्दगीको मज्जा । होइन के ?
बुद्धिसुद्दी नभए पनि राम्री चाहिँ हुनुपर्छ । नत्र केटाहरुले बाल मतलब दिँदैनन् फेरि । अहिले मैले राम्री–राम्रीलाई छानेर प्रेम गरेझैँ त्यति बेला पनि त्यसै गरे भने ? फेरि म बर्बादै हुन्छु । हरहालतमा राम्री त हुनुप¥यो । हे भगवान् ! कल्याण गर्नु मेरो । तपाईंलाई थाहा भयो होइन ? मैले अर्को जन्मका लागि पनि बन्दोबस्त गरी भ्याएँ । होस् नहोस् । भए पनि जाती, नभए पनि झनै जाती हुनेछ । टन्टै साफ । होइन के ?
म घरको जेठो छोरा । एउटा भाइ छ । दिदी–बहिनी छैनन् । अरु बेला त्यस्तै हो । तिहार आएपछि भने तनाव हुन्छ, टीका कोसँग लगाउने हो भनेर । कहिले ताँती लाग्छन् बनाएका दिदी–बहिनी । कहिले खाली बस्नुपर्छ । झर्को लाग्छ मलाई यो तिहार भनाउँदो पर्व । नआइदिए हुन्थ्यो भनी भाकल गरी बस्छु म त ।
अँ, साँच्चै अघिदेखि म प्रेम–प्रेम भन्दै थिएँ नि ! त्यो प्रेम होइन रे ! झुट नै झुटको जन्जालसिवाय केही पनि होइन । कोही–कोही त यसो पनि भन्छन् । यसोभन्दा म दिनहीन भएर त्यसो भन्नेका अगाडि दुरूस्तै भावुकता देखाइदिन्छु । विनाप्रमाण मूर्ख केटीहरु र स्वास्नीमान्छेहरु पत्याइदिन्छन् । तत्काल मलाई गर्दै गरेको प्रेमभन्दा बढी प्रेम गर्न थाल्छन् पनि । पहिले त एउटै समयमा दुई–तीन जनासँग हुन्थेँ म । अहिले भने म एउटा समयमा एउटैसँग छु । खै किन यत्रो धेरै माया गर्छु म कौशलालाई ? मलाई नै थाहा छैन । फुर्सद भयो कि म उसको कोठामा जान्छु । पस्न नपाउँदै ढोकैमा अँगालो हाल्न आइपुग्छे । कहिले भने रिसाएर बस्छे देख्दै नदेखेझैँ गरी । चिन्दै नचिनेझैँ गर्छे ।
‘तिमी आइमाई जस्तो नबन । स्मार्ट केटीमान्छे हौ तिमी ।’
‘महोदय, म आइमाईमान्छे नै हुँ र मलाई आइमाई भनेकै मन पर्छ ।’
‘आइमाई’को उच्चारण नारीवादीहरुले सुने के भन्लान् यो कौशलालाई ?
उफ् ! पहिलोपल्ट मेरो कुरा काटी कौशलाले, होइन भने आफूलाई आइमाई जस्तो भनेको पटक्कै रूचाउँदैनन् युवतीहरु । झन् स्वास्नीमान्छेहरुलाई केटीजस्ती छौ भन्दिनुपर्छ त्यसै–त्यसै मख्ख पर्छन् तत्कालै सोह्र वर्षकी भैहालेँझैँ गर्छन् ।
‘तिमी त मेरी स्वास्नीभन्दा पनि गएगुज्रेकी रहिछौ ।’
अरु हुन्थे भने यति भन्दा रिसले भुतुक्कै भइसक्थे । उनीहरु मेरी स्वास्नीभन्दा माथ्लो स्थानमा राख्छन् आफूले आफैँलाई । उनीहरुको निजी भावना नै त हो । मलाई कुनै आपत्ति हुँदैनथ्यो । कौशला भने मरीमरी हाँस्छे ।
‘तपाईंकी स्वास्नी होइन । एउटाको त पक्कै स्वास्नी हुनु छ मलाई । तपाईंले चाहनुभयो भने पनि तपाईंकी स्वास्नी हुन्नँ म । सधैं काटेको कुखुरा जस्तो छट्पटीमा जिन्दगी बिताउनु छैन मलाई ।’
कौशला अहिलेसम्म मैले सङ्गत गरेका केटीहरुभन्दा बिल्कुलै भिन्दै भएर निस्की । दर्जनांै युवतीसँग सङ्गत गरेँ हुँला । सबै आभारी हुन्थे मसँग । कति त आफ्नो लोग्ने पनि मै जस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्थे । लोग्नेसँग भन्दा बढी खुसी मसँग हुन्थे । लोग्नेका नराम्रो कुरा काट्थे मसँग । बिहे हुन बाँकी युवतीहरुको सपनाको राजकुमार थिएँ म । सबै मेरो प्रशंसा गर्थे । उनीहरु पर्फेक्ट मर्द भन्थे मलाई । ५ फिट ७ इन्च अग्लो छु । बाहुनको छोरा हुँ । ‘ह्यान्डसम’ भन्छन् सबै मलाई । मलाई पनि म स्वास्नीमान्छेका लागि कुनै कुरामा अक्षम छु जस्तो कहिल्यै लाग्दैन । ती केही युवती अनि कौशलाले मेरो यो मान्यता र सिद्धान्त धुलोमा मिसाइदिए । कौशला बातबातमै मेरो मर्ममा प्रहार गर्छे । अझ ऊ त मलाई बूढो भइसकेको आरोप लगाउँछे ।
‘अर्काको लोग्ने र अर्काको प्रेमीसँग यसरी बानी पार्नु हुन्थेन । मबाट गल्ती भो । कन्ट्रोल गरिनँ आफूलाई । अब झन् निरन्तरता दिनु कति मूर्खता होला !’
‘त्यसो नभन कौशला ! यतिखेर मेरी स्वास्नी र पे्रमिका जे भन्नु तिमी नै हौ । तिम्लाई रात नै चाहिन्छ । म सिर्फ एक रात तिमीसँग कटाउँछु त्यसपछि जे भन्नु छ भनौली । बिन्ती नाइँ नभन ।’
‘के काम तपाईंको ? नाँच्न नजान्ने आँगन टेठो ! आफ्नो सामथ्र्य छ्रैन उल्टो ‘दिन’लाई दोष नदिनुहोस् । बिल्कुलै हुँदैन । दुवैतिरबाट शून्य । एउटा त देख्ने मान्छेले नराम्रो सोच्छन् । अर्को कुरा तपाईंले बानी लगाइदिनुभयो तर त्यो के हो भन्ने नै निश्चित गर्न सकिनँ । म अन्योल अन्योलमै छु ।’
कौशला मबाट सम्पूर्णरुपमा टाढिई । यो भन्दा पहिले कैयौंलाई मैले छोडँे । आज एउटीले मलाई छोडी । पीडाले छाती पोलेको छ । अनेक अनेक कुरा खेल्छन् मनभित्र–मुटुभित्र । कौशलालाई भावुक बनेर पगाल्न नखोजेको पनि हैन मैले । सकिनँ ।
‘मेरो कारण खुसी हुने धेरै छन् । सुखदुःखमा साथ दिने कोही छैनन् । अँध्यारो घर र रोगी बाउ–आमाबाहेक कोही छैनन् । म बलजफ्ती हाँसिरहेको दुःखी र खराब मान्छे हुँ ।’
‘एक्चुअल्ली विशालजी, यस्तो उस्तो सोच्नुहुन्न…। आफ्नो कारण अरु खुसी हुनु भनेको त राम्रो कुरा हो नि । अरुलाई दुःख दिन पो हुन्न । संसारमै अमूल्य हुन् बाउ–आमा । रोगी भए पनि तपाईंसँग त हुनुहुन्छ । खुसी रहनुहोस् । अँध्यारो–उज्यालो भन्ने कुरा त मनको कुरा हो । यो घर त केवल घाम–पानीका लागि न हो ।’ निर्धक्कसँग उपदेश दिई । बाँकी सारा वर्ष उसैसँग बिताऊँ जस्तो, कौशलालाई अचम्मको प्रेम गर्थें । मैले भन्ने गरेको प्रेमभन्दा बिल्कुलै भिन्दै । जुन प्रेमको परिभाषा मसँग छँदै छैन । मेरो प्रेम परास्त गराइदिई ।
मेरै आँखा अगाडि प्रजापतिकै घरबाट आफूभन्दा होचो अनि अनुहार पनि नपरेको, जात पनि नमिलेको केटोसँग कौशलाले बिहे गरी । कौशलालाई बिर्सन म मेरी स्वास्नीलाई जबरजस्ती सम्झिरहेको छु । साक्षात् देवीजस्ती लाग्न थालेकी थिई । मैले सङ्गत गरेका दर्जनौं युवतीभन्दा अलग…। बिल्कुलै आइमाई ।
जिन्दगीको २१ औँ संस्करण
“विप्ल्याँटे” जिन्दगी विवरण